“Ilaahaybaa ku Sheegi!” Sheekada ninka isaga oo dhintay aarsaday, magtiisana la qaatay. – Abdilahi Dualeh
Posted byDualeh April 22, 2021 Posted inUncategorized
Laba nin ayaa beri wada safray. Meel geri-go’an ah yagoo maraya ayaa ay arrin ku murmeen. Murankii ayaa isku bedelay cadho oo gacan-ka-hadal u dhawaaday. Mid ayaa naftiisa kula heshiiyey inu ninka dib u dhigto. Micnaha, in aanu hadda dilin. Wuxu ku tallamay in la ogyahay in ay labadoodu wada safreen. Haddii wuu dhintay uu yidhaana aan laga yeeli doonin ‘ninkii warkiisa ma hayo’.
Beri kale ayay ku kulmeen meel cidlo ah. Nin waa daacad sheekadii iyo murankiina waa iska ilaaway. Kan kalena naftiisa iyo shaydaan ayaa u qurxiyey fursaddii uu berigaa lumiyey in aanay maanta seegin. Go’aanna wuxu ku gaadhay inu halkaa ku khaarajiyo. Hadal guhaad ah ayuu ku bilaabay wuxuuna ugu hanjabay inu maanta dilayo. Wuxuuna ku yidhi, “Maanta waan ku dilayaa. Cid danbe oo is kaa waydiin doontaana jiri mayso. Ee bal car waa kaase maanta haddaan halkaa kugu dilo yaa i sheegi in aan ku dilay?!”
Ninkii kale ismabuu dhibine wuxu ugu jawaabay, “Ilaahay ayaa ina saddexeeya oo ku sheegi doona.” Ilayn waa wax shaydaan watee Ilaahbaa ku sheegidii ayaabu ka sii gubtay. Kamana sii warramine waran ayuu ku taagay. Maydkiisana bartii ayuu kaga tegey.
Ninkii gacan-ku-dhiiglaha ahaana meeshii isaga huleel. Ninkii dhintayna dadkiisii meel walba u mare war iyo wacaal wax sheegana la waa. Muddo badan raadcayntiisa markii lagu daalayna la iskaba ilow, lagana quusay.
Sannaddo ayaa ka soo wareegay. Ilaahayna ma sheegin, isna isma sheegin. Ilaah waa kuu seeta-dheereeyaa, mase dhaafo dembigaad aadame ka gasho.
Wuxu arrinku sidii ahaadaba, hadal-hayntiisu markii ay dantay, muddo badanna ka soo wareegtay ayuu gacan-ku-dhiiiglihii beri danbe soo maray goobtii uu ku dilay ninkii beri saaxiibkii ahaa. Waa meel geri-go’an ah oo cagta dadka iyo aragtiduba ka caaggantahay. Wuxu arkay lafihiisii oo kala daatay. Laftii madixiisa ayuu soo dul istaagay. Wuxuuna ku yidhi, “Waadigii i lahaa Ilaahbaa i sheegi doonee muu ku sheego dee?!” isagoo warankiisiina si xoog ah ugu dhufanaya laf-khalfoofeedkii madixiisa.
Laftii ayaa inta ay falliidhantay, uu fallidh fiiqani xaggiisa u soo booday. Waxaanay ka xagatay oo ka dhiijisay calooshiisa oo qaarkeed qaawanaa. Garo-oo waa berigii shaadhku aanu jirin ee raggu go’ keliya jeeni qaaran jiray, calooshuna qaar qaawanayd.
Meeshii ayaa qoon isku bedeshay. Waa ay millishay. Isagu qarso is yidhi. Waase qoon isagu hadli doona. Waa qoon isku bedeli doona sheegiddii Alle ee uu fogaysanayay. Malaha wuxu filayay inu Ilaahay toos u hadlo oo uu yidhaa reer hebelow ninkiinii hebel ayaa dilay!
Waa qoon Alle amar siiyey. Wuu sii waynaaday. Ninkii kolka ka socon kari waa. Sakaraadkuna guriga dhex dhigay. Wuxu muddo silco, oo uu nolosha ku uraba, wadkiisii inu u yimi is garay. In aanu ka kacayn qoonkana yaqiinsay.
Ugu danbayn, ayuu gartay gafkuu galay in aanu la god gelin. Wuxuuna go’aansaday in inta goori goor tahay uu sheego arrinka. Wuxa uu dalbaday in odayadii reerkiisa loogu yeedho, si buu yidhi uu dardaaran xoog leh u siiyo inta aanu dhiman. Dadkii hore dad dardaaranka qofkooda il-geeriyaadka leh weeleeya bay ahaayeene duqaydii reerka la iskugu yeedh.
Hadalkii wuxu ku bilaabay, “Tolkayow, arrinbaan idiin sheegayaa. Ninkii hebel ee reer hebel ee berigii la waayey aniga ayuu gacantayda ku baxay. Meel cidlo ah anagoo joogna ayuu shaydaan ii qurxiyey in aan dilo, anigoo khilaaf hore oo naga dhexeeyey daba socday. Wuxuuna igu yidhi haddaad i disho Allaa ku sheegi. Waxbana kama qorine waan dilay, afkaygana dabooshay. Beri dhawayd ayaan lafihiisii meeshii ku maray. Mar kale ayay naftu ii qurxisay in aan maydkiisa ku jees-jeeso. Waranka ayaanan ku dhuftay anigoo waydiinaya Ilaahii uu sheegayay halka uu jiro! Laf igu soo falliidhantay ayaa qoonkan aan u dhimanayo ii gaysatay. Markaa tolkayow, anigu Ilaahaygii ayaan u toobo-keenayaa, idinkuna magtii ninkaa iga bixiya!”
Dadku si kastoo ay berigaa u ahaayeen dad aan dawlad kala hagta lahayn, haddana waxa ay lahaayeen xeerar iyo dhaqan suubban, oo Alle-ka-cabsi saldhig u yahay, oo marka arrimuhu murgaan wax kala furdaamiya. Ninkii gacan-ku-dhiigle u dhimay eeshii saaxiibkiisii beri hore lafoobay u gaystay, magtii ninka gar-darrada uu ku dilayna reerkiisii halkii ku bixi.
Waxa aan is waydiiyaa, odayaasha maanta joogaa arrinkaa mag ma ka bixin lahaayeen?
Waxa ay ila tahay MAYA. Waxa tegey damiirkii tognaa. Waxa jira si-xun wax-u-sheegga iyo dhanka-xun-wax ka eegga. Waxa aan filayaa odayaasha maantu in ay odhan lahaayeen, “ninkaa waan idinka dilay oo innankayagii wuu qirtay. Laakiin inankiinii oo mayd ah ayaa aarsaday oo innankayagii dilay. Markaa wax aan mag ku bixinnaa meesha ma yaallo!”
Waa male. Waa suurta-gal in wali sama-talis noolyahay, wuuse inagu sii yaraanayaa!
Sheekada Mid ka Mida Jabhadihii Soomaalida
2 thoughts on ““Ilaahaybaa ku Sheegi!” Sheekada ninka isaga oo dhintay aarsaday, magtiisana la qaatay.”
Mohomed faarah kibaar says:
Waa aheeko aad u qiimo badan waan wada skhriyey waanan dhamaysatay saaxiib mahadsanid sheekooyin noocan oo kale ah inoogu soo celi marar badan
Ku mahadsanid wll qiimo badan waqtigaaga qaaliga ah ee aad ku bixisay.